ကင်မရာ ၄ လေးလုံးပါတဲ့ Nova3စမတ်ဖုန်းကို မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Huawei
11 Jul 2018 . 4:08 PM
Huawei အနေနဲ့ Nova3စမတ်ဖုန်းကို ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ တရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်လို့ ကြေညာပြီးသား ဆိုပေမယ့်လည်း VMall မှာလက်ရှိ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ သတင်းအရ Nova3စမတ်ဖုန်းရဲ့ Specification အသေးစိတ်ကို သိရှိရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးတွေကြောင့် စမတ်ဖုန်းကိုချမပြသေးဘဲ VMall မှာ Pre-order စပြီး လက်ခံနေပြီဆိုတာ ထည့်မပြောထားပေမယ့် ကောလာဟလ ထွက်ခဲ့တဲ့အတိုင်း Nova3ကို ရှေ့နောက် ကင်မရာ ၂ လုံးစီနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဒီဇိုင်းပိုင်းအနေနဲ့ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲထားတာမျိုးမရှိဘဲ P20 Lite စမတ်ဖုန်းပုံစံနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ဖြစ်နေမှာပါ။ Display ပိုင်းမှာတော့ 6.3″ ရှိ Full HD+ Resolution ကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး 19:9 Aspect Ration ရှိ IPS Panel ကိုပဲ ဆက်လက် အသုံးပြုထားပါတယ်။ Huawei ကဘယ်လို စမတ်ဖုန်းအသစ်ပဲ ထုတ်ထုတ် iPhone X လို Notch ဒီဇိုင်းကို အခုထိ မဖြုတ်ထားသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီပြဿနာကို Software နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက် Notch ကို သုံးရတာ မကြိုက်သူအတွက် အစဉ်ပြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Nova3ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ Huawei ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Kirin 970 Chipset နဲ့ မောင်းနှင်မှာဖြစ်ပြီး Processor မှာ Performance Core နဲ့ Low Power Core ဆိုပြီး နှစ်မျိုးပါဝင်မှာပါ။ Octa-core Processor ဖြစ်သော်ငြား အခုလို Core အမျိုးအစား နှစ်မျိုးခွဲပြီး အသုံးပြုလိုက်ခြင်းက စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း ပိုအားသာချက်ရှိမှာဖြစ်သလို ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုကိုလည်း ခြွေတာရာရောက်မှာပါ။ Huawei အဆိုရ 2.4GHz မြန်နှုန်းရှိ Core ၄ လုံးတစ်စု ပါဝင်တဲ့ Cortex-A73 ကို ဂိမ်းကစားဖို့နဲ့ Ultra HD Content တွေကိုင်တွယ်ဖို့ Processor က စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး Core ၄ လုံးတစ်စု ပါဝင်ဦးမယ့် Cortex-A53 ကိုတော့ 1.8GHz မြန်နှုန်းနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသုံးပြုဖို့နဲ့ သာမန်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာမျိုးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။
GPU Turbo Technology has been included
ဒီလို သီးသန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မယ့် Nova3စမတ်ဖုန်းရဲ့ Processor ကို 6GB RAM နဲ့ အားဖြည့်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအနေအထားတိုင်းဆိုရင် Mid-range စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ကို ကိုင်လှုပ်ဦးမယ့် ဖုန်းတစ်လုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် Data သိမ်းဆည်းဖို့အတွက် 64GB ဒါမှမဟုတ် 128GB ဆိုပြီး ရွေးချယ်လို့ရဦးမှာပါ။ ဘက်ထရီပိုင်းကိုလည်း 3,750 mAh ပမာဏရှိ ဘက်ထရီ တပ်ဆင်ပေးထားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်နေ့တာသုံးစွဲမှုအတွက် လုံလောက်မှုရှိမှာပါ။ ဘက်ထရီရဲ့ အားသွင်းစနစ်ကို Huawei ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Super Charger နည်းပညာနဲ့ ထောက်ပံ့ထားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အရင် Nova 3e စမတ်ဖုန်းဟာ P20 အနွယ်ဖြစ်တာနဲ့အညီ ကင်မရာပိုင်း စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ Mid-range စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးအတွက် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ အနေထားတစ်ခုအထိ ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ Huawei က ဒီအစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး Nova3မှာတော့ ပိုမို အဆင့်မြင့်တဲ့ ကင်မရာတွေ သုံးလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောဘက်ကင်မရာကို Honor 10 စမတ်ဖုန်းပုံစံ ညာဘက်ခြမ်းမှာ ဒေါင်လိုက်တပ်ဆင်ပေးထားတာ တွေ့ရမှာပါ။ Dual Camera ကိုမှ မတူညီတဲ့ Colour Sensor နဲ့ Monochrome Sensor ဆိုပြီး 16MP နဲ့ 24MP အသီးသီးရှိတဲ့ ကင်မရာနှစ်လုံးနဲ့ ပွဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Monochrome Sensor ရဲ့ Aperture Value က 1.8 ရှိတာကြောင့် အလင်းရောင်အားနည်းနေတဲ့အချိန် ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အတွက် ပိုပြီးအသုံးတည့်ဦးမှာပါ။
Nova3စမတ်ဖုန်းရဲ့ ရှေ့ကင်မရာကို Selfie သမားတွေအတွက်ရော ဓာတ်ပုံဝါသနာအိုးတွေပါ အစဉ်ပြေပြေ လှလှပပ Selfie ပုံရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ 24MP Primary Camera ကို 2MP Secondary Camera နဲ့ အားဖြည့်ထားတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဒီလို ရှေ့ဘက်မှာ ကင်မရာနှစ်လုံးထည့်လိုက်တာက Selfie ချည်းအသားပေးဖို့ မဟုတ်ပဲ ခေတ်စားနေတဲ့ Portrait Mode ကို Front Camera နဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်အောင် 2MP ကင်မရာနဲ့ ပံ့ပိုးပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Nova3စမတ်ဖုန်းကို Android Version 8.2 နဲ့ ပွဲထွက်လာနိုင်ပြီး Huawei ရဲ့ကိုယ်ပိုင် EMUI တစ်ခါတည်းပါလာမှာပါ။ မကြာသေးခင်က မိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ GPU Turbo နည်းပညာကို အသုံးပြုထားမှာဖြစ်ပြီး Apple ရဲ့ Animoji ထက်ပိုပြီး သဘာဝကျတဲ့ 3D Qmoji ကို အသုံးပြုလို့ရဦးမှာပါ။ ဒီလို AI နည်းပညာရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကလည်း စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာရှိတဲ့ UI နဲ့သော်လည်းကောင်း Chipset နဲ့ပါ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Security Feature အနေနဲ့ Fingerprint Sensor ကို စမတ်ဖုန်းရဲ့ ကျောဘက် အလယ်နေရာမှာ တပ်ဆင်ပေးထားတာက သုံးရတာ အစဉ်ပြေလျှင်မြန်မှုလည်း ရှိမှာပါ။
Smartphone is incredibly thin at its size along with Fingerprint Sensor in the middle
လက်ရှိအချိန်မှာ Nova3စမတ်ဖုန်းရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်ကို VMall မှာ ဖော်ပြထားပြီးပြီဆိုပေမယ့် ရောင်းချမယ့် ဈေးနှုန်းအတိအကျကို ပြောဆိုထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ အရောင်အနေနဲ့ ၄ မျိုးရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Nebula Purple အလုံးကိုတော့ P20 Pro စီးရီးရဲ့ Blue-ish Purple မော်ဒယ်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါအပြင် Black ၊ Aqua Blue နဲ့ Primrose Gold ဆိုပြီး ရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့အထိ Pre-order လက်ခံသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကငျမရာ ၄ လေးလုံးပါတဲ့ Nova3စမတျဖုနျးကို မိတျဆကျလိုကျပွီဖွဈတဲ့ Huawei
Huawei အနနေဲ့ Nova3စမတျဖုနျးကို ဇူလိုငျလ ၁၈ ရကျနမှေ့ာ တရားဝငျမိတျဆကျပေးသှားမယျလို့ ကွညောပွီးသား ဆိုပမေယျ့လညျး VMall မှာလကျရှိ ထှကျပျေါလာခဲ့တဲ့ သတငျးအရ Nova3စမတျဖုနျးရဲ့ Specification အသေးစိတျကို သိရှိရပွီ ဖွဈပါတယျ။ ဘယျလိုအကွောငျးမြိုးတှကွေောငျ့ စမတျဖုနျးကိုခမြပွသေးဘဲ VMall မှာ Pre-order စပွီး လကျခံနပွေီဆိုတာ ထညျ့မပွောထားပမေယျ့ ကောလာဟလ ထှကျခဲ့တဲ့အတိုငျး Nova3ကို ရှနေ့ောကျ ကငျမရာ ၂ လုံးစီနဲ့ မွငျတှရေ့မှာပါ။
ဒီဇိုငျးပိုငျးအနနေဲ့ ထူးထူးခွားခွား ပွောငျးလဲထားတာမြိုးမရှိဘဲ P20 Lite စမတျဖုနျးပုံစံနဲ့ ခပျဆငျဆငျ ဖွဈနမှောပါ။ Display ပိုငျးမှာတော့ 6.3″ ရှိ Full HD+ Resolution ကို တပျဆငျပေးထားပွီး 19:9 Aspect Ration ရှိ IPS Panel ကိုပဲ ဆကျလကျ အသုံးပွုထားပါတယျ။ Huawei ကဘယျလို စမတျဖုနျးအသဈပဲ ထုတျထုတျ iPhone X လို Notch ဒီဇိုငျးကို အခုထိ မဖွုတျထားသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့လညျး ဒီပွဿနာကို Software နဲ့ ဖွရှေငျးနိုငျတဲ့အတှကျ Notch ကို သုံးရတာ မကွိုကျသူအတှကျ အစဥျပွနေိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Nova3ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျနဲ့ ပတျသကျလို့ Huawei ရဲ့ ကိုယျပိုငျ Kirin 970 Chipset နဲ့ မောငျးနှငျမှာဖွဈပွီး Processor မှာ Performance Core နဲ့ Low Power Core ဆိုပွီး နှဈမြိုးပါဝငျမှာပါ။ Octa-core Processor ဖွဈသျောငွား အခုလို Core အမြိုးအစား နှဈမြိုးခှဲပွီး အသုံးပွုလိုကျခွငျးက စှမျးဆောငျရညျပိုငျး ပိုအားသာခကျြရှိမှာဖွဈသလို ဘကျထရီသုံးစှဲမှုကိုလညျး ခွှတောရာရောကျမှာပါ။ Huawei အဆိုရ 2.4GHz မွနျနှုနျးရှိ Core ၄ လုံးတဈစု ပါဝငျတဲ့ Cortex-A73 ကို ဂိမျးကစားဖို့နဲ့ Ultra HD Content တှကေိုငျတှယျဖို့ Processor က စီမံခနျ့ခှဲနိုငျဦးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး Core ၄ လုံးတဈစု ပါဝငျဦးမယျ့ Cortex-A53 ကိုတော့ 1.8GHz မွနျနှုနျးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသုံးပွုဖို့နဲ့ သာမနျရုပျရှငျကွညျ့တာမြိုးအတှကျ အထောကျအကူဖွဈစမှောပါ။
ဒီလို သီးသနျ့တာဝနျထမျးဆောငျနိုငျမယျ့ Nova3စမတျဖုနျးရဲ့ Processor ကို 6GB RAM နဲ့ အားဖွညျ့ထားမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ဒီအနအေထားတိုငျးဆိုရငျ Mid-range စမတျဖုနျးစြေးကှကျကို ကိုငျလှုပျဦးမယျ့ ဖုနျးတဈလုံးလို့ ဆိုနိုငျပါသေးတယျ။ ဒါ့အပွငျ Data သိမျးဆညျးဖို့အတှကျ 64GB ဒါမှမဟုတျ 128GB ဆိုပွီး ရှေးခယျြလို့ရဦးမှာပါ။ ဘကျထရီပိုငျးကိုလညျး 3,750 mAh ပမာဏရှိ ဘကျထရီ တပျဆငျပေးထားမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ တဈနတေ့ာသုံးစှဲမှုအတှကျ လုံလောကျမှုရှိမှာပါ။ ဘကျထရီရဲ့ အားသှငျးစနဈကို Huawei ရဲ့ ကိုယျပိုငျ Super Charger နညျးပညာနဲ့ ထောကျပံ့ထားမှာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
အရငျ Nova 3e စမတျဖုနျးဟာ P20 အနှယျဖွဈတာနဲ့အညီ ကငျမရာပိုငျး စှမျးဆောငျရညျဟာ Mid-range စမတျဖုနျး တဈလုံးအတှကျ ကောငျးမှနျပွညျ့စုံတဲ့ အနထေားတဈခုအထိ ပေးစှမျးနိုငျခဲ့တာပါ။ Huawei က ဒီအစဥျအလာကို ထိနျးသိမျးထားပွီး Nova3မှာတော့ ပိုမို အဆငျ့မွငျ့တဲ့ ကငျမရာတှေ သုံးလာခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။ ကြောဘကျကငျမရာကို Honor 10 စမတျဖုနျးပုံစံ ညာဘကျခွမျးမှာ ဒေါငျလိုကျတပျဆငျပေးထားတာ တှရေ့မှာပါ။ Dual Camera ကိုမှ မတူညီတဲ့ Colour Sensor နဲ့ Monochrome Sensor ဆိုပွီး 16MP နဲ့ 24MP အသီးသီးရှိတဲ့ ကငျမရာနှဈလုံးနဲ့ ပှဲထှကျလာမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Monochrome Sensor ရဲ့ Aperture Value က 1.8 ရှိတာကွောငျ့ အလငျးရောငျအားနညျးနတေဲ့အခြိနျ ဓာတျပုံ၊ ဗီဒီယိုရိုကျဖို့အတှကျ ပိုပွီးအသုံးတညျ့ဦးမှာပါ။
Nova3စမတျဖုနျးရဲ့ ရှကေ့ငျမရာကို Selfie သမားတှအေတှကျရော ဓာတျပုံဝါသနာအိုးတှပေါ အစဥျပွပွေေ လှလှပပ Selfie ပုံရိုကျကူးနိုငျဖို့ 24MP Primary Camera ကို 2MP Secondary Camera နဲ့ အားဖွညျ့ထားတာ တှရေ့မှာပါ။ ဒီလို ရှဘေ့ကျမှာ ကငျမရာနှဈလုံးထညျ့လိုကျတာက Selfie ခညျြးအသားပေးဖို့ မဟုတျပဲ ခတျေစားနတေဲ့ Portrait Mode ကို Front Camera နဲ့ ရိုကျကူးနိုငျအောငျ 2MP ကငျမရာနဲ့ ပံ့ပိုးပေးထားတာလညျးဖွဈပါတယျ။
Nova3စမတျဖုနျးကို Android Version 8.2 နဲ့ ပှဲထှကျလာနိုငျပွီး Huawei ရဲ့ကိုယျပိုငျ EMUI တဈခါတညျးပါလာမှာပါ။ မကွာသေးခငျက မိတျဆကျပေးထားတဲ့ GPU Turbo နညျးပညာကို အသုံးပွုထားမှာဖွဈပွီး Apple ရဲ့ Animoji ထကျပိုပွီး သဘာဝကတြဲ့ 3D Qmoji ကို အသုံးပွုလို့ရဦးမှာပါ။ ဒီလို AI နညျးပညာရဲ့ လုပျဆောငျနိုငျစှမျးကလညျး စမတျဖုနျးတဈလုံးမှာရှိတဲ့ UI နဲ့သျောလညျးကောငျး Chipset နဲ့ပါ တိုကျရိုကျသကျဆိုငျနတောလညျးဖွဈပါတယျ။ Security Feature အနနေဲ့ Fingerprint Sensor ကို စမတျဖုနျးရဲ့ ကြောဘကျ အလယျနရောမှာ တပျဆငျပေးထားတာက သုံးရတာ အစဥျပွလြှေငျမွနျမှုလညျး ရှိမှာပါ။
လကျရှိအခြိနျမှာ Nova3စမတျဖုနျးရဲ့ အသေးစိတျ အခကျြအလကျကို VMall မှာ ဖျောပွထားပွီးပွီဆိုပမေယျ့ ရောငျးခမြယျ့ စြေးနှုနျးအတိအကကြို ပွောဆိုထားခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ အရောငျအနနေဲ့ ၄ မြိုးရှေးခယျြနိုငျမှာဖွဈပွီး Nebula Purple အလုံးကိုတော့ P20 Pro စီးရီးရဲ့ Blue-ish Purple မျောဒယျနဲ့ ခပျဆငျဆငျ မွငျတှရေ့နိုငျပါတယျ။ အဲ့ဒါအပွငျ Black ၊ Aqua Blue နဲ့ Primrose Gold ဆိုပွီး ရှေးခယျြလို့ရမှာဖွဈပွီး ဇူလိုငျလ ၁၉ ရကျနအေ့ထိ Pre-order လကျခံသှားမှာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
by Su Yi Htet .4hours ago
by Min Than Htike .5hours ago